Gandaki Sanchar » बरुवालको घरमै पुगेर किन नेता जोशीले दिए परिवारलाई समवेदना ?
बरुवालको घरमै पुगेर किन नेता जोशीले दिए परिवारलाई समवेदना ?
माघ ७, पर्वत । मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ घुरुङशेराका गुमानसिंह बरुवाल नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता हुन । पदको कुनै लालच नपाली इमान्दार भएर जीवनभर नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय बरुवालको निधन भएको मंगलबार १० दिन पुग्यो । बरुवालको निधन भएपछि मोदी र पातिखोलाको संगमस्थलमा पर्ने घाटमा अन्त्येष्टीका क्रममा नेपाली काँग्रेसको झण्डा ओढाएका नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभा सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले मंगलबार बरुवालकै घरमा पुगेर परिवारमा समवेदना ब्यक्त गरेका छन् ।
बरुवालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै जोशीले स्वर्गीय बरुवालको घरमै पुगेर शोकाकुल परिवार तथा गाउँबासीहरुप्रति दुःखको बेलामा आपूmलाई सम्हाल्न अनुरोध गरे । प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि स्वर्गीय बरुवालले दिएको योगदान नेपाली काँग्रेसले मात्र नभई सबै राजनैतिक दलहरुले पनि स्मरण गर्ने जोशीले बताए । बरुवालको निधनले आपूm सहित सिँगो पार्टी नै मर्माहत भएको बताउँदै नेता जोशीले बरुवालले देखाएको बाटोमा लाग्न सक्ने हो भने मात्र सपना साकार हुने बताए ।
बरुवाललाई श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना दिनका लागि जोशीसहित नेपाली काँग्रेस पर्वतका सभापति खिमप्रसाद भुषाल, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य डा. चुडामणि शर्मा, नेपाली काँग्रेस मोदी गाउँपालिकाका सभापति जिवनाथ शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष छविलाल तिवारी, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रसाद घायललगायत उनको घरमै पुगेको थियो । बरुवालको ७५ बर्षको उमेरमा पुस २७ गते निधन भएको थियो ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभा सदस्य जोशीले नेकपाका नेता भक्त कुँवरको आमा डिलकुमारी कुँवरको निधनप्रति पनि दुःख गरेका छन् । गएराती निधन भएकी कुवँरको पातिचौरस्थित घाटमा अन्त्येष्टिमा उपस्थित भइ जोशीले श्रद्धाञ्जली दिएका हुन । उनले परिवारजनलाई भेट्दै समवेदना दिएका थिए ।
कुँवरको अन्त्येष्टिमा जोशीसहित नेपाली काँग्रेसका सभापति खिमप्रसाद भुसाल, सदस्य डा.चुडामणी शर्मासहित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता, संघसंस्था, कर्मचारी, उद्योगी, ब्यावसायी पुगेका थिए । कुँवरको ७५ बर्षको उमेरमा पोखरामा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७६, मंगलवार १५:०६